झापामा कोइराला बस्ने थापा निवासमा सन्नाटा « purwanchal National Daily
झापामा कोइराला बस्ने थापा निवासमा सन्नाटा
‘खबर सुन्नेवित्तिकै झड्का लाग्यो, केही सोच्नै सकिएन, गलाअवरुद्ध भए, एकाएक स्तब्ध भयौं’– झापा बिर्तामोडका सफल व्यवसायी राजेन्द्रकुमार थापा र अर्चना थापाको अनुभूति हो यो । पूर्व प्रधानमन्त्री एवम् कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाको निधनको खबर मंगलवार विहान ७:३० बजे थाह पाउादा उनीहरुको भोगाई हो त्यो । त्यो खबर कोइराला परिवारकै मृदुला कोइरालाले दिएकी थिइन् उनीहरुलाई । केही सोच्नै नसकेका राजेन्द्र कही क्षणमै काठमाडौं जाने र कोइरालाप्रति श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्ने निधोमा पुगे । युवा नेता विश्वप्रकाश शर्मा, तिलकप्रसाद गिरीसहित उनी जहाजबाट तत्कालै काठमाडौं पुगे, महाराजगञ्जस्थित कोइराला निवासमा ढलेका सुशील’दाको शरीरमा फूल चढाएर नमन गरे ।
‘सुशील’दाको निधनले मैले अभिभावक गुमाएा, अब मेरो परिचय नै हरायो, ठूलो क्षति भो’– राजेन्द्रले भावविह्वल हुादै भने– ‘सुशील’दा झापा आउादा बस्ने घर भनेर सरकार, मन्त्री, पार्टी, कार्यकर्ता सबैतिर मेरो परिचय बनेको थियो ।’
हुन पनि ०६३ सालदेखि कोइराला झापा आउादा थापाकै मा बस्थे । १० पटकभन्दा बढी बसे होला । एक, दुई दिन हरेक पटक आउादा बस्थे, कुनै समय त चार, पााच दिन नै बस्थे । थापाको सागै जोडिएको पूर्वको घर रामबाबु प्रसाईं (छोरा टोरुप प्रसाईं) को हो । त्यो घर वीपी, गणेशमान र गिरिजा झापा आउादा बस्ने घर हो । पछि सुशील’दा पार्टीको नेता, सभापति र प्रधानमन्त्री हुादा पनि थापाकोमा बसे । उनले प्रसाईंको या छेउमा जोडिएको घर जसको भए पनि त्यही बस्ने इच्छा व्यक्त गरेकाले थापालाई प्रस्ताव आएको थियो । जब पहिलो पटक थापा निवासमा बसे तब उनले कहिल्यै घर फेरेनन् । होटलमा त झन कहिल्यै बसेनन् । उनलाई आफ्ना घरमा लैजान कैयौं नेता, कार्यकर्ताबीच भनाभन नै चल्थ्यो । तर सुशील’दाले थापाकैमा बस्ने अडान लिएपछि कसैको केही चलेन । प्रधानमन्त्री हुादा एकपटक स्व. सीके प्रसाईं (श्रीमती गिरिराजकुमारी प्रसाईं) निवासमा बसे र त्यसअघि अर्को पटक व्यवसायी एकराज उप्रेतीकोमा बसे । त्यसताका पनि उनी थापा निवासमा नआई सकेनन्, सााझसम्म थापा निवासमै विताएका उनी विहान चिया पिउन पनि त्यही पुग्थे । थापा निवासमा उनको गाढा प्रेम थियो । एक कार्यकर्ताले सुनाए– ‘राजेन्द्र जीकोमा बस्दा सुशील’दाले आफ्नै घरमा बसेको अनुभूति गर्नुहुन्थ्यो ।’ त्यहाा बस्दा उनलाई आनन्द अनुभूति हुन्थ्यो रे । थापा पत्नी अर्चनाले कोइरालाले भनेको कुरा सम्झदै भनिन्– ‘यहाा आउादा मलाई अर्कै फिलिङ हुन्छ, शान्ति महशुस हुन्छ’ भन्थे रे ।
थापा परिवारकै अगुवाइमा बिर्तामोडमा स्थापित राधा माधव समिति र त्यसले गर्ने आध्यात्मिक क्रियाकलापबाट पनि कोइराला प्रभावित रहेछन् । एक पटक उनलाई पनि घर नजिकैको राधा–माधव धाम लगेछन् थापा दम्पत्तिले । त्यहाा १०० बृद्धबृद्धालाई कपडा वितरण लगायतको कार्यक्रम रहेछ । अर्चनाले थाली समाउन लगाएर अर्को पटक आरती पनि गर्न लगाएकी रहिछिन् । त्यहीबाट अझ प्रभावित कोइराला भन्थेरे– ‘राजनीतिक र आन्दोलनका कारण कहिल्यै आध्यात्मिक चिन्तन गर्न पाइएन, अध्यात्ममा वास्तविक शान्ति, सुख र खुशी मिल्दो रहेछ ।’
एक पटक ताप्लेजुङबाट कोइराला फर्कने क्रममा थापा दम्पत्ति दिल्ली भ्रमणमा रहेछन् । कोइरालाले सहयोगीलाई राजेन्द्रजीकोमा बस्ने चााजोपााजो मिलाउन भनेछन् । जब थापा दम्पत्ति नभएको थाह पाए उनी चिन्तित भएछन् । ‘घरमा कोही काम गर्ने त होलान् नि, बरु आफै पकाएर खाऔं– बस्न चाहिा त्यहीं बसौं’– भन्दै ताप्लेजुङबाट उनी सोझै थापा निवास आइपुगेछन् । संयोगबश थापा दम्पत्ति पनि दिल्लीबाट घर आइ पुगेकाले कुनै असहज नभएको बताइन्छ ।
पार्टी सभापति हुादा होस् या त प्रधानमन्त्री हुादा, कोइरालालाई बस्नको लागि स्तरीय होटलको चााजोपााजो पनि नमिलाइएको होइन । पार्टीको या सरकारको निर्धारित कार्यक्रम सकिएपछि सााझ उनको गाडी कहिल्यै होटलतिर लम्किएन । लुसुक्क अतिथि सदन पछाडि रहेको थापा निवास पुग्थ्यो गाडी । थापा पार्टीका सक्रिय कार्यकर्ता हुन् । कतिपयलाई लाग्थ्यो भेटघाट होला, केही क्षणमा कोइराला फर्कन्छन् तर कोइराला त्यही बस्थे, अरुको अनुमान झुठो हुन्थ्यो ।
त्यसो त थापा निवासमा पूर्व प्रधानमन्त्री गिरिजा कोइराला, एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई लगायत मुख्य पार्टीका शीर्ष नेताहरु पुगेका र भेटघाट भेटघाट गर्ने गरेका छन् । थापा परिवारलाई सबैले विश्वास पात्र र सहयोगीको रुपमा हेर्छन् । मनमा कुरा नलुकाई बोल्ने, प्रष्ट र इमान्दार व्यवसायीका रुपमा राजेन्द्रको आफ्नै परिचय छ ।
कोइरालाको जीवनशैलीबाट थापा परिवार पनि प्रभावित छ । सादा जीवन, सरल र त्यागी सन्त नेताका रुपमा सुशील’दालाई उनीहरुले चिनेका छन् । कोइरालाबाट थापा परिवारले कुनै लाभ लिएनन् । जसरी कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुअघिसम्म सार्वजनिक लाभको पदमा रहेनन् । ‘उहााको सादगी नै हामीलाई राम्रो लाग्थ्यो’– अर्चना भन्छिन्– ‘हामीलाई के चाहियो र जनतालाई गर्नुभए हामीलाई खुशी लाग्थ्यो ।’ उनले अगाडि भनिन्– ‘उहाा घरमा आउादा परिवारको अभिभावक, बुबा आएको अनुभूति हुन्थ्यो, घर नै उज्यालो हुन्थ्यो ।’ यो केवल वितेको क्षणको अनुभूति हो । बर्तमान बदलिएको छ । कोइराला अब संसारमा छैनन् । राष्ट्रले अभिभावक गुमाएको अनुभव गरेको छ । बिर्तामोडको थापा परिवारमा कोइरालाको निधनले सन्नाटा छाएको छ । राजेन्द्र स्वर्गीय कोइरालाप्रति श्रद्धाञ्जलि दिन काठमाडौं पुगेका छन्, अन्त्येष्टी गरेर कोइरला परिवार र कांग्रेसका सबैसाग विदा भएर मात्र झापा फर्कने सोचाइमा छन् । यता अर्चना सुशील’दासागका वितेका क्षण झल्झली सम्झिन्छिन् । अभिभावक गुमाएको अनुभूतिले कुनै काममा मन लागेको छैन उनको ।
कोइरालाका लागि खाना अर्चना आफै बनाउाथिन् । ‘साकाहारी खाना मन पथ्र्यो उहाालाई’– उनले भनिन्– ‘भात थोरै, साग धेरै खानुहुन्थ्यो, सादा खानामै रमाउनु हुन्थ्यो ।’ एक पटक उनले बनाएको केराको बुङगोको अचार कोइरलालाई नयाा परिकार र औधि मनपर्‍यो रे । हरेक पटक उनी नयाा परिकार र अग्र्यानिक सादा खाना खुवाउाथिन् कोइरालालाई । कोइराला थापा परिवारका सदस्य, थापा दम्पत्तिका छोराछोरीसाग उत्तिकै घुलमिल हुन्थे । केटाकेटीको पढाइ बारे चासोपूर्वक सोध्थे । धेरै पढून्, राम्रो बनून् भन्ने कोइरालाको शुभेच्छा रहन्थ्यो । केटाकेटी र थापा दम्पत्तिसाग तस्वीर खिच्न पनि उनी आफै वातावरण मिलाएर अग्रसर हुन्थे । कोइरालाको निधनले अहिले घर नै उजाड र खाली भएको अनुभूति सुनाउादै अर्चनाले भनिन्– ‘उहााको निधनले हामीलाई एक्लो भएको जस्तो भइरहेको छ ।’
कोइराला कार्यकर्तालाई त्यागी हुन प्रेरित गर्थे । राजनीतिमा लागेर त्यसकै आडमा कमाउनेको उनी कट्टर विरोधी थिए । बरु कमाएर राजनीतिमा आउन सल्लाह दिन्थे । राज्यको ढिकुटीको कहिल्यै दुरुपयोग गरेनन् उनले । एक पटक थापा निवासमै बस्दा २/४ दिनको बन्द हड्ताल थियो । हेलिकोप्टर मगाएर काठमाडौं जाने कुरा अरु नेता कार्यकर्ताले गरे । तर उनले मानेनन् । बरु २/४ दिन यतै बस्छु, राज्यको सम्पत्ति पनि दुरुपयोग, हेलिकप्टर चढ्यो भनेर मिडियाले लेखेर राजनीति छवि नै विगारी दिन्छन्, भनेर जान मानेनन् रे । अहिले मुलुकलाई यस्तै त्यागी, इमान्दार, सादा र सरल जीवनशैली बााच्ने नेताको खााचो छ ।